Tubi - Free Movies & TV Shows 3.0.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Tubi - Free Movies & TV Shows
Tubi - Free Movies & TV Shows ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခမဲ့ hit ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစီးရီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Watch ။ Tubi မျှမကရက်ဒစ်ကတ်များနှင့်မျှမ subscription ကိုလိုအပ်သည်နှင့်အတူ, 100% ဥပဒေရေးရာန့်အသတ် streaming များဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အခါပုံမှန်တီဗီထက်နည်းပါးလာကြော်ငြာများဖြင့်, သင်သည်စောင့်ကြည့်ချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ပါ။ Tubi ဆုရရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစီးရီး featuring အကြီးဆုံးအခမဲ့ streaming service ကိုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုသည်ရှိ၏, ဟာသကနေဒရာမာရန်, ကလေးတွေဂန္နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ, anime နှင့်ဗြိတိန်စီးရီးအဖြစ်နယ်ပယ်အကြိုက်ဆုံးရန်။ ယခု Download များနှင့်ယနေ့အခမဲ့ဖျော်ဖြေရေး streaming start!
Tubi အပတ်တိုင်းအခမဲ့ HD ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်များကထပ်ပြောသည်, ဒါကြောင့်သင်သွားလာရင်း stream မှဖျော်ဖြေရေးထဲက run ဘယ်တော့မှ (နှင့်အိမ်တွင်!) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ဒါကြောင့်သင် (သင်ကဲ့သို့အခြား streaming များန်ဆောင်မှုများအဘို့ပြု) အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးများအတွက်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါနိုင်ပါတယ်အဖြစ်တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်အဖြစ်အများအပြားအမျိုးအစားလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အွန်လိုင်းတီဗီများမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအစဉ်အမြဲအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါပြသပေမယ့်သူတို့မှာလည်းမြင့်မား IMDb အပေါ် rated ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအစားအားလုံးအသစ်ထွက်ရှိမှုများ, သင်သည်အခြားလူကြိုက်များ subscription ကိုဗီဒီယိုက apps များအပေါ်ကိုမတှေ့နိုငျသောအန်နီမေးရှင်းတီဗီစီးရီးအပါအဝင်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်စုဆောင်းခြင်း Naruto ကို, Yu-gi-oh, ကောင်းဘွိုင်စည်းသွက်ဂျက်ဇနှင့်အများကြီးပိုပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် torrent အကြောင်းအရာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးစီးဆင်းနိုင်သည့်အခါ?
HD ကို, Movies Watch & တီဗီအကြီးမားဆုံးဟောလိဝုဒ်စတားနှင့်အတူဖော်ပြပေး
ယင်း၏ချုပ်ထဲမှာဟောလိဝုဒ်၏အရသာ Get နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီရှိုးများအတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေကြည့်ပါ။
နေ့စဉ်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ရှိုး streaming အခမဲ့ video - စာရင်းသွင်းခြင်းပေးဆောင်ဘယ်တော့မှမ!
သငျသညျစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသည့်ဗီဒီယိုများ bookmark ကိုမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်းစီ Create
နယူး HD ကိုရုပ်ရှင်များ & တီဗီတစ်ခုချင်းစီကိုသောကြာနေ့ Added ဖော်ပြပေး
နေ့စဉ်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးနှင့် Wendy ဝီလျံ၏နေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူမယ်ရီလင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဒရာမာ၏မ Get
နယူးရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအပတ်စဉ်ကဆက်ပြောသည် - ယခုအပတ်သစ်ကိုဖွင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ featured အပိုင်းရှာဖွေပါ!
HD ကိုတီဗီရှိုး၏လူကြိုက်များရွေးချယ်ရေး (သင်ချင်တယ်အားလုံး binge အခမဲ့ခံစားရ)
Chromecast ကိုပံ့ပိုး & Multi-Device ကိုထပ်တူပြုခြင်းမပြုလုပ်
Chromecast ကိုသို့မဟုတ် Airplay နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာ Watch
သင့်ရဲ့ Android device ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်ချိတ်ဆက်တီဗီ (Chromecast ကို Apple ကတီဗီ, Roku devices များ, စတာတွေက Playstation, Xbox, အမေဇုံမီးသတ်တီဗီက Samsung တီဗီ,) နှင့်အွန်လိုင်း www.tubitv.com မှာပေါ်ကြည့်ရန်
သင်သည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်ချွတ် left အတိအကျဘယ်မှာဗီဒီယိုကြည့် Continue ။
anime (နယူး anime နှင့် Next ကိုနေ့!)
... ပြီးတော့ဟောလိဝုဒ်, ဂျပန်, ကိုရီးယားကနေပိုပြီးတာ!
, Ryan Reynolds featuring အော်စကာဆုရနှင့်ရုပ်ရှင်များအပါအဝင် Curtis သင်ဦးဆောင်ဟောလိဝုဒ်အခွက်တဆယ်ထံမှကိုချစ်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးကိုရှာပါ "" 50 Cent က "" ဂျက်ဆင်, Arnold Schwarzenegger, Charlize Theron, Dwayne Johnson ကရှမွေလဂျက်ဆင်, စယ် Crow နှင့်ဂျူလီယာလူးဝစ်-Dreyfus များစွာသောသည်အခြားအထက်တန်းလွှာဟောလိဝုဒ်မူပိုင်အကြား။
သင်အွန်လိုင်းစီးဆင်းရန်အဘို့အမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသစ်ကိုအခမဲ့တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုရန် (အသစ်အကြောင်းအရာတိုင်းသောကြာနေ့ထည့်ပြီး) အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်စစ်ဆေးပါ။ သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ရှိုးပွဲကြည့်ရှုဖို့ torrent မှမရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျ Tubi မှဆက်ပြောသည်မြင်ချင်သောအရာကိုသိပါစေနှင့်ကျွန်တော်သူတို့အားဗီဒီယိုများ free ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်ရံဘဝမှာအကောင်းဆုံးအမှုအရာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုသိစေပါ။
ယနေ့ Tubi တီဗီ Download နှင့်အခမဲ့တီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်တော်လှန်ရေးမှကြိုဆိုပါ၏!
Tubi - Free Movies & TV Shows အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tubi - Free Movies & TV Shows အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tubi - Free Movies & TV Shows အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tubi - Free Movies & TV Shows အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 1.35k 1.11M
Tubi - Free Movies & TV Shows ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tubi - Free Movies & TV Shows အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.0.5
ထုတ်လုပ်သူ Tubi TV
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://tubitv.com/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 23:F9:7D:81:40:06:D3:D4:44:CB:33:C8:DD:B9:CE:0D:11:86:D1:76
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rob Brown
အဖွဲ့အစည်း (O): Adrise
Tubi - Free Movies & TV Shows APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ